Sida loo xakameeyo kombuyutarkaaga | War gadget
Sida loo xakameeyo kombuyutarkaaga fog
Kahor kaydinta daruurtu waxay noqotay mid caan ah, sida kaliya ee looga sii wadi karo ka shaqeynta meel kale waxay ahayd iyada oo la iswaafajinayo dhammaan xogta kombuyuutarkeena leh pendrive, ugu yaraan wixii aan ogaanay inaan u baahanahay, hab aan loo isticmaalin mahadhada nidaamka daruuraha kaydinta
Si kastaba ha noqotee, maahan xalka wax walba, gaar ahaan marka shirkadeena, waxaan isticmaalnaa barnaamijkeena maareynta, barnaamij aan bixinaynin suurtagalnimada in meel fog laga xirmo ama aad u badan oo qandaraas looga dhigo adeegsiga goosgooska ah. Xaaladahan oo kale, xalka ayaa ah in meel fog laga xirmo.
Kaliya laakiin aan ka helno suurtagalnimada in meel fog laga xirmo ayaa ah inaan u baahanahay qalabku inuu ahaado marwalba, ama nasasho, si xiriirku u noqdo mid la dhisi karo marka aan dirno codsiga isku xirka. Tan waxaa si fudud lagu xallin karaa iyadoo barnaamijyada laga duulayo ama laga fogaynayo qalabkeenna fog, si ay u shidnaato markaan ogaanno inaan ogaanno sida loo isticmaalo.
Markaad meel fog ka xirmayso, xaaladaha oo dhan waxaan u baahanahay laba codsi, mid u shaqeeya macmiil ahaan, midka aan ku rakibo kumbuyuutarka meesha aan ku xirmayno, iyo mid kale oo u shaqeeya sidii server, midka aan ku rakibno kombiyuutarka waxaan rabnaa inaan maamulno meel fog.
Dhammaan codsiyada aan hoosta ku tusineyno looma qorsheynin inay si fog ugala shaqeeyaan kombiyuutar kale si dhammaystiran noogu adeegaan shaqadan. Mar alla markii aan caddeynno in dhammaan codsiyadaas ay si buuxda u shaqeynayaan, tallaabada xigta waa in aan isweydiino haddii ay u qalmaan lacagta ku baxday (dhammaantood ma ahan lacag la’aan).
1 Barnaamijyada desktop fog ee PC iyo Mac
1.2 Desktop desktop fog
1.3 Desktop fog Windows
1.4 Miis kasta
1.5 Maareeyaha Mashiinka Fog
1.6 Desktop-ka Iperus Remote
Barnaamijyada desktop fog ee PC iyo Mac
Magaca TeamViewer wuxuu la xiriiraa isku xirnaanta fog ee kombiyuutarada ficil ahaan tan iyo markii kumbuyuutarradu bilaabeen inay yimaadaan guryaha. Adeegani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna macquulsan ee aan ka heli karno suuqa, maadaama aysan noo oggolaaneyn oo keliya inaan maamulno kooxda meel fog, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaanaysaa inaan u kala wareejinno faylasha u dhexeeya kooxaha, wada hadal si aan ula xiriirno kooxaha kale .. .
Isticmaalka codsigu gabi ahaanba waa u bilaash macaamiisha gaarka loo leeyahay, laakiin ma ahan shirkadaha, shirkadaha leh qorshooyin kala duwan oo la heli karo iyadoo ku xiran tirada kumbuyuutarrada aan dooneyno inaan ku xirno. TeamViewer, ayaa loo heli karaa labadaba Windows sida macOS, Linux, ChromeOS, Raspberry Pi, macruufka iyo Android.
Xakamaynta Remote TeamViewer
Xakamaynta Remote TeamViewerfree
Desktop desktop fog
Xalka ay Google na siiso ayaa ah kan ugu fudud oo dhan, waxayna noo ogolaaneysaa inaan kumbuyuutar ka maamulno meel fog, kombiyuutar kale (PC / Mac ama Linux) ama qalab kasta oo moobiil ah iyada oo loo marayo codsi u dhigma Desktop Google Chrome Remote Ma aha wax ka badan kordhinta aan ku rakibeyno si toos ah Bakhaarka Webka ee Google Chrome.
Marka aan rakibno, waa inaan ku dheereyno kumbuyuutarka kumbuyuutarka aan dooneyno inaan ku xirno oo aan nuqul ka sameysano lambarka uu muujiyey arjiga. Kumbuyuutarka aan ka socon doonno, waxaan ku gallin doonnaa lambarkaas si aan u dhisno xiriirka. Marka aan dhidibbada u taagno, waxaan ku keydin karnaa kumbuyuutarkeenna si aan mustaqbalka ugu xirmi karno.
Desktop Remote Desktop gabi ahaanba waa bilaash waxayna u baahan tahay isku xirnaan xasilan oo shaqeyneysa (isku xirnaanta ADSL si fiican uma shaqeyneyso, aan dhahno).
Desktop fog Windows
Xalka ay Microsoft na siiso lagama heli karo dhammaan noocyada Windows, kaliya noocyada 'Pro' iyo 'Enterprise' si aad meel fog ugala xiriiraan. Laga soo bilaabo kombiyuutarka macmiilka waxaan ku xirmi karnaa iyada oo aan wax dhibaato ah ku jirin nooca Windows 10 Home. Mar alla markii aan hawlgalinay hawshan, si aan u isticmaalno, waa inaan laga soo dejiyey Windows app store, macOS, macruufka iyo Android codsi u dhigma.
Waxaad u isticmaali kartaa macmiil Microsoft Remote Desktop inaad ku xirmaan PC fog iyo ilaha shaqadaada meelkasta oo aad isticmaaleyso qalab kasta. Waad kuxirankartaa kombuyutarkaaga shaqada waxaadna marin uheli kartaa dhamaan codsiyadaada, feylashaada iyo ilaha shabakada sida inaad fadhidid miiskaaga. Waad uga tagi kartaa codsiyada goobta shaqada ka dibna waxaad ku daawan kartaa isla codsiyada guriga, dhammaan macaamiisha RD.
Muuqaalka Muuqaalka Microsoftfree
Miiska fog 8
Developer: Shirkadda Microsoft
Desktop Microsoft Remotefree
Codsi kale oo aan u baahnayn wax maalgashi ah oo awood u leh inuu kula xiriiro meel fog kombiyuutar kale, waxaan ka helnaa Desk kasta, codsi sidoo kale loo heli karo labadaba Windows sida macOS, Linux, BSD bilaash ah, macruufka iyo Android. Desk kasta wuxuu noo ogolaanayaa inaan la xiriirno asxaabta kale ee aan isla dokumentiga ka wada shaqeyno, isku wareejinta feylasha inta udhaxeysa kumbuyuutaro kala duwan, wuxuu noo ogolaanayaa inaan qaabeyno isku xirnaanta adeegsadaha, diiwaan galino isku xirnaanta la sameeyay ... waxaa loo heli karaa shirkadaha, nooc aan bilaash ahayn, sida ku dhacda kan ay bixiso TeamViewer.
AnyDesk, barnaamijka kumbuyuutarka fog
AnyDesk desktop -ka fogfree
Maareeyaha Mashiinka Fog
Maareeyaha Miisaanka fog (RDM) wuxuu udub dhexaad u yahay dhammaan isku xirnaanta masaafada hal madal oo si ammaan ah ay ugu wadaagaan isticmaalayaasha iyo dhammaan kooxda. Iyada oo la taageerayo boqolaal teknoolojiyad la dhisay - oo ay ku jiraan nidaamyo badan iyo VPNs - oo ay weheliso qalab maamul maareynta ereyga sirta ah, kontaroolada marin-u-helka ee heer-caalami ah, iyo codsiyo adag oo moobil ah si loogu kabo macaamiisha desktop-ka ee Windows iyo Mac, RDM waa mindi ciidanka Switzerland loogu adeegsado meelaha fog.
Maareeyaha Mashiinka Fog Waa la heli karaa iyada oo lacag la'aan ah adeegsi aan xirfad lahayn iyo xarumaha waxbarashada. Waxay ku habboon tahay Windows, macOS, iOS iyo Android.
Goobta Shaqada ee Wareejinta
Goobta Shaqada ee Wareejintafree
Desktop-ka Iperus Remote
Iperius Remote waa barnaamij fudud oo dhinacyo badan leh oo noo ogolaanaya inaan meel fog ku xirno wixii kumbuyuutar ah Windows ama server. Rakibaadda ma aha wax dhib badan oo noo ogolaanaya in aan qabanno wareejinta faylka, kalfadhiyo badan, marin otomaatig ah oo toos ah, bandhigyo iyo shaashad wadaag.
Waxa kaliya ee aan ka heli karno adeeggan ayaa ah in xilligan la joogo kaliya la jaan qaada kombiyuutarada Windows, sidaas darteed haddii aad leedahay Mac shaqada, waxaad u baahan doontaa inaad doorato mid ka mid ah xalalka kala duwan ee aan kor ku soo sheegnay. Sida aaladaha, mobilada, waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa iPhone-keena ama Android-ka inaan ku xirno meel fog.
Developer: Gali Software
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Sida loo xakameeyo kombuyutarkaaga fog
EMUI 10.1 Global Beta: Terminallada cusbooneysiiya iyo sida loo sameeyo